Yusuf Garaad: Socdaalkeygii Woqooyiga - Taxanaha 89 - 90 - Qaybta Afraad
Socdaalkeygii Woqooyiga - Taxanaha 89 - 90 - Qaybta Afraad
Dayaarad ku nooc ah kuwii aan ku safri jirnay
Ugu dabeyn waxaan uga dan leeyahay in aan anigu isku daweeyo. Ugu yaraan in aan isku qanciyo in aan billaabay in aan guto waajibkeyga ah in aan si sax ah u soo gudbiyo fahahmkeyga waxa dhacay inta aan goobjoogga u ahaa.
Nooca hadda Madaxda looga sheegto ma ahayn xaalka Berbera. Keliya qof aad is barateen kuguna kalsoon ayaa kuu sheegi karay cabashada Madaxda ka dhanka ah.
Waxaan Taxanaha ku soo qaadi doonaa arrimo aad u culus oo uu Taliye Ku Xigeenka NSS-ta Berbera igala hadlay oo qaarkood ay ka mid yihiin taariikhda dhacdo muhiim ah oo Berbera xilligaas la soo gudboonaatay.
Posted by Yusuf Garaad at 10:06:00